Ihempe zePolo → Impahla yokukhuthaza • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Ihempe zePolo ithandwa kakhulu phakathi kwengqokelela yasentwasahlobo nehlobo, kungekuphela nje ngenjongo zabucala, kodwa kwishishini nakwinjongo zentengiso.
Ihempe zePolo zinokutshintshwa ngokulula kwiimfuno zomntu ngamnye kunye nokulindelweyo ngokubonga kwinkonzo yokufeketha kwekhompyuter, eyona ndlela ihlala ixesha elide kunye nenhle yokumakisha.
Ukoneliseka komthengi yeyona nto iphambili kuthi.
Kungenxa yeso sizathu le nto sidala ukuba ii-odolo zobuqu zithathelwe ingqalelo zonke iinkcukacha. Asiboneleli kuphela ngomgangatho ophezulu, kodwa kunye nenkonzo yobungcali. Ixabiso isambatho sekhompyuterIhempe zepolo yenye yezona zinto zintle zibalaseleyo ngenxa yegrama yazo, kuxhomekeka kubunzima beprojekthi kunye nevolumu. Nangona kunjalo, iindleko zomyalelo ziyakwaziwa kwasekuqaleni kwisiseko sefomati yomfanekiso eyonakalisiweyo.
Ihempe zePolo-zodidi oluphezulu
Iingubo kunye neelenzi zentengiso kufuneka zikhululeke, kwaye ngaxeshanye zilungele, ukuba sifuna uphawu lubonakaliswe luhlobo kunye nobuchwephesha.
Ihempe zePolo ziyafumaneka kwezethu Ivenkile zenziwe ngezinto ekumgangatho ophezulu ezihambelana nomsebenzisi kwaye zimvumela inkululeko yokuhamba.
Ukugqitywa kobuhle bezixhobo kuyenza ibe ngubo eza kusebenza kumashishini amaninzi awahlukeneyo. Ijongeka ilungile kuhlobo ngalunye. Iialves ezenziwe ngealightweight zinzima ukuzonakalisa. Ukuzihlamba rhoqo akuniki nasoyikiso. Impahla igcina iipropathi zayo ixesha elide, eqinisekisa inzuzo yokuthenga. Sisindululo esifanelekileyo sabantu abatyala imali yabo ngobulumko.
Ihempe zePolo zisetyenziswa ngokuzithandela njengengubo yabasebenzi, ngakumbi iseti, o.k.okunye nezinto zokunxiba ngokwamaxesha ebusika, anje ngo.k.t. Uboya, kodwa baphathwa njenge gajethi ehlanganisiweyo yabathengi okanye iikhontraktha.
Ukusetyenziswa kwabo ngumbhinqiso kukwasebenza ngexesha leentlobo ezahlukeneyo zeziganeko okanye njengebhaso kukhuphiswano. Konke kuxhomekeke kwimbono yophawu. Njengoko ubona, le yindlela yokufumana umdla kunye nokwamkelwa kwabaphulaphuli bakho.
Uluhlu olubanzi lweemodeli
Phakathi kweehempe zeepolo kukho iimodeli zamadoda, ezabafazi, abantwana kunye neyonke-unisex.
Zonke iimodeli ziyafumaneka kwiintlobo ngeentlobo zemibala, ngaloo ndlela zenza ukuba kukhethwe i-T-shirt kwiimeko nakwindawo, ekwayinzuzo enkulu. Iimodeli zokubonakalisa zibumba iqela leemveliso ezikhethekileyo, ngenxa yokuba kunokwenzeka ukwandisa inqanaba lokhuseleko emsebenzini.
Iqela lethu liya kukuvuyela ukukunceda ukhethe imveliso efanelekileyo kunye nokwenza ngokwakho. Zonke iiprinta ezenziwe kwindlu yethu yokufeketha zenziwe ngesiseko seetekhnoloji zala maxesha. Sinepaki yomatshini ehamba phambili osinika umsebenzi ofanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu wabathengi bethu.
Uluhlu olupheleleyo lweemodeli lunokuthengwa zombini kwivenkile yethu ekwi-Intanethi www.pm.com.pl okanye kwivenkile yethu kwiAllegro "PRODUCER-BHPMsgstr ". Ukuba ufuna ukubona ubungakanani bomsebenzi kwaye ufunde malunga nemiyalelo yethu ye-embroidery, nceda undwendwele ithebhu malunga neyethu firmie.
Malunga nehempe yepoloehamba kakuhle ngehempe yepolounxibe ntoni ngehempe yepolounxibe ntoni ngehempe yepolowenzeni ngehempe yepoloapho ihempe zepolo ezilungileyounxiba njani iihempe zepolouhlanjwa njani iihempe zepoloindlela yoku-ayina iihempe zepoloindlela yokusonga iihempe zepolololuphi uhlobo lwesweatshirt yehempebungakanani ubude beehempe zepoloyeyiphi imibala yeehempe zepolozeziphi izihlangu zepoloyintoni ibhulukhwe yehempeIhempe zepolo zamadodaihempe zepoloIhempe ze-adidas polo ezinoshicileloIhempe zabasetyhiniIhempe zabasetyhini eziprintiweyoIikhati zepolo yenkampani eprintiweyoIsiqhamo sehempe polo ishicilelweiihempe zepolo aphoIhempe zepolo indlela yokunxibaIhempe ze-lacosteIhempe zepolo zamadodaIikipa zepolo zamadoda eLacosteIhempe zepolo zamadoda ezinoshicileloI-polo polo ihempe eneprintaIhempe zepolo ezinoshicileloIihempe zepolo kunye noshicilelo lwe-allegroIihempe zepolo kunye noshicilelo lweBydgoszczIihempe zepolo ezinoshicilelo lwamaxabisoIihempe zepolo ezinoshicilelo lwabafaziIihempe zepolo ezinoshicilelo lwabantwanaIihempe zepolo ezinenkampani eprintiweyoIihempe zepolo kunye noshicilelo lomzimbaIihempe zepolo kunye noshicilelo lweKrakowIihempe zepolo kunye noshicilelo lwesikhepheIhempe zepolo kunye nokuprinta kweLublinIihempe zepolo kunye noshicilelo lokhuseloIihempe zepolo ezinoprinta ongumongikaziIhempe zepolo kunye nepoznań yokuprintaIihempe zepolo kunye noshicilelo lwaseWarsawIikipa zepolo kunye neyakho eyiprintiweyoIihempe zepolo ezinoshicilelo olubhaliweyoIhempe zepolo kunye noshicilelo lwakhoIihempe zepolo kunye noshicilelo lwe-allegroIikipa zepolo kunye neyakho yoshicilelo eWarsawiihempe zepoloI-T-shirt eneprinta yakho yepolo